Ulauncher and Synapse: Linux အတွက်ထူးခြားသော Application Launchers ၂ Linux မှ
Ulauncher and Synapse: Linux အတွက်ထူးခြားသော Application Launchers ၂
ကျယ်ပြန့်များ၏ဘာသာရပ်ဖုံးအုပ်ပြီးနောက် Desktop Environments (DEs)အဆိုပါ Window မန်နေဂျာများ (WMs) နှင့် Startup မန်နေဂျာများ (DMs), ဒီနေ့ကျနော်တို့၏ဆောင်ပုဒ်ကိုပြန်သွားပါ Linux အတွက် Application Launchersအများအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်၎င်း၏အင်္ဂလိပ်အမည်ဖြင့်လူသိများ launchers။ နှင့်ဤ post ကိုကျနော်တို့အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ပါလိမ့်မယ် Ulancher နှင့် Synapse.
ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းဖြင့်မျှဝေထားပြီးဖြစ်သောအရာများကိုဖြည့်စွက်ရန် Application Launchers (Launchers) ပြီးသားထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် commented ဦး နှောက်, အဲလ်ဘတ်နှင့် Kupferဒီတစ်နှစ်တည်းမှာပဲ
ထိုအချိန်ကငါတို့ယခင်နှင့်လတ်တလောထုတ်ဝေအပေါ်ငါတို့၏ထုတ်ဝေမမြင်နိုင်သို့မဟုတ်မြင်ဘူးသောသူတို့အဘို့ ဦး နှောက်, အဲလ်ဘတ်နှင့် Kupferဤစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးနောက်အောက်ပါလင့်ခ်များကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Brain - ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ပွင့်လင်းသော Cross-Platform App တစ်ခု
Brain Plugins - ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ရန် Plugins များ
အဲလ်ဘတ်နှင့်ကူဖာ: Cerebro ကိုအစားထိုးရန်အကောင်းဆုံးအိုး ၂ လုံး
သတိပြုသင့်သည်မှာအကြောင်းအရာကိုအပြည့်အဝမလေ့လာမီ၊ Application Launchers ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Operating Systems တွင်များသောအားဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်သော tools များသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ချက်များဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် ကီးဘုတ်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းနှင့်မြန်နှုန်း လုပ်ရပ်တွေကို execute ရန်။ များသောအားဖြင့်အလွန်အသုံး ၀ င်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု၊ Desktop Environment (DEs) ငါတို့တစ်ခုသုံးတယ် Window Manager (WMs).
1 Ulauncher and Synapse: Linux အတွက် Launchers များများများများစားစား
1.1 Ulauncher ဖြစ်သည်
Ulauncher and Synapse: Linux အတွက် Launchers များများများများစားစား
အတိုင်း ၏ဝက်ဘ်ဆိုက် GitHub အပေါ် Ulauncher၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
"Ulauncher သည် Linux အတွက်လျင်မြန်သော application launcher ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို GTK + ကို အသုံးပြု၍ Python တွင်ရေးသားခဲ့သည်".
ယင်း၏အကြား ထူးခြားသောလက္ခဏာများ အောက်ပါထင်ရှားစွာပြ:
Fuzzy ရှာဖွေရေးတောင်းခံမှု၏အမည်ကို၎င်း၏ pop-up search box တွင်ရေးသည့်အခါစာလုံးပေါင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်စရာမလိုပဲ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေလိုသည့်အရာနှင့်အမှန်တကယ်နီးကပ်သည့်အရာကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ပြေး။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ရွေးချယ်မှုများ (ပုံစံများ) ကိုသတိရပြီးအသုံးပြုသူအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကိုအလိုအလျောက်ရွေးချယ်ပါ။
စိတ်ကြိုက်အရောင် themes များ။ သုံးစွဲသူများကို ၄ င်း၏ graphical interface အတွက် built-in themes များ ၄ ခုကမ်းလှမ်းသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်စာရွက်စာတမ်းများပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီသင်စိတ်ကြိုက်အရောင်အခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်နှင့်ထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဖြတ်လမ်းများနှင့် extension များဖြေ - ၎င်းသည်အတော်အတန်ခေတ်မီပြီးခေတ်မီသော Launcher ဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောဖြတ်လမ်းများနှင့်တိုးချဲ့မှုများအားဖြင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကြိုးပမ်းသည်။ လိုအပ်သောဗဟုသုတရှိသူများကို web ရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်အချို့ scripts များမှဖန်တီးရန်သို့မဟုတ် third-party extension ၏ installation ကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုခြင်း။
အမြန်လမ်းညွှန်ရှာဖွေခြင်း: Ulauncher သည်စာရိုက်သည့်စာလုံးများ၏သော့များကိုနှိပ်ရုံဖြင့်လွယ်ကူစွာဖိုင်များနှင့်လမ်းညွှန်များကိုလွယ်ကူစွာသွားလာရန်ခွင့်ပြုသည် «~» o «/» စတင်ရန် ဒါ့အပြင်သော့ပေါင်းစပ်ကိုနှိပ်ပါ «Alt+Enter» o «Alt+Número» ရှာဖွေမှုမှာပြထားတဲ့ options တချို့ကိုတိုက်ရိုက်စီရင်ခွင့်ပြုတယ်။
မင်းအတွက် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပါ သငျသညျကိုဖြောင့်သင့်ရဲ့သွားနိုင်ပါတယ် download အပိုင်း.
အတိုင်း ၏ဝက်ဘ်ဆိုက် Launchpad အပေါ် Synapse၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
"ORapplications များကိုအသုံးချရန်အပြင် Zeitgeist အင်ဂျင် သုံး၍ သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖိုင်များကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုနိုင်သည့် Vala ၌ရေးသားထားသော semantic launcher".
၎င်းသည်ပလပ်ဂင်များအသုံးပြုခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့ရှိသည်၊ ဥပမာ - Devhelp, Dictionary နှင့် Terminal အမြန် command များ။
လွတ်လပ်သောတေးဂီတဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း (သို့) ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်သောအသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်၊ Operating System (Places, Documents, Images, Video, Contacts) ၏ဖိုင်များကိုရှာဖွေရန်၊ DuckDuckGo ဖြင့်အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်း၊ Gnome မှသုံးစွဲသူ (Close, shutdown, restart) သည်အလားတူဖိုင်များကိုရှာဖွေရန် Zeitgeist ကို အသုံးပြု၍ hybrid ရှာဖွေမှုများကိုပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင် UPower ကို အသုံးပြု၍ ကွန်ပျူတာကိုအခြားအရာများအကြားဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။
မင်းအတွက် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပါ သင် site ကိုတိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည် Launchpad သိုmyမဟုတ်၎င်းတို your ကို Distro သိုreမဟုတ်သိုcommandမဟုတ်ူမန်မိာိုံင်သည်အတိုင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်း Command ဖြင့် install လုပ်ပ။ MX Linux ကို 19.2 ဖြန့်ဖြူး:
သင်စစ်ဆေးနိုင်သကဲ့သို့ Ulauncher နှင့် Synapse2အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ app ကို launcher ကအခြားနည်းလမ်းဖြစ်ကြသည် ဦး နှောက်, အဲလ်ဘတ်နှင့် Kupfer။ ဤ ၅ ခုနှင့်အခြားမည်သည့်အရာသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်ကိုသာကြည့်နိုင်သည် Linux ကို.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ဒီနောက်ဆုံးပေါ်2app launchers အကြောင်းကို «Ulauncher y Synapse»အပေါ်ယခင်သူမြားကိုဖြည့်သော «Cerebro, Albert y Kupfer»; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Ulauncher and Synapse: Linux အတွက်ထူးခြားသော Application Launchers ၂
CRIU၊ Linux ရှိ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အခြေအနေကို သိမ်းဆည်းပြီး ပြန်လည်ရယူသည့်စနစ်
Raspberry Pi 400, ကီးဘုတ်ပုံစံ RPi